BREAKING NEWS: Siyaasa Maqalee “to’annee” duuba jiru. – Kichuu
HomeBREAKING NEWS: Siyaasa Maqalee “to’annee” duuba jiru.
BREAKING NEWS: Siyaasa Maqalee “to’annee” duuba jiru.
#BREAKING NEWS Siyaasa Maqalee “to’annee” duuba jiru.
Dheengadda koloneel Abiyyi Ahmed Maqalee guutummaa guutuutti to’anne jedhee ibsa addunyaaf Itoophiyaaf baase. Maaliif ibsa sana baase jedhee namni gaafate hin jiru? Garuu herreegaan waan sana godhe Abiyyi.
1ffaa: Dhiibbaan biyyoota alaa fi hawaasa addunyaa dorrobee dhufe cabuu qaba jedhee amane. AU, EU, UN Security Council hundi marii hunda galeessa godhi jedhanii dhiibbaa gochaa jiru. Sana didaa as gahe. Didaa itti fufuu hin danda’u Abiyyi. Kanaaf lola xumureera jedhee ajandaa marii hunda galeessaa kuffisuuf, lola mo’adheera jedhee labse. Garuu, lolli hin dhumanne, reefuu eegala. Dhiibbaa addunyaa ofirraa cabsuuf kana godhe.
2ffaa: Waraanni koloneel Abiyyi mataan isaa saayikolojiidhaan dadhabaa dhufeera. Waraanni isaa gar- malee dhumaniiru gama lixa Tigraayiin, gama kibba Tigraayiin. Gaarreen Tigraayi hundi waraana koloneel Abiyyi irratti ibidda roobsu. Hospitaalli madoo yaaluu dadhabeera. Duubaan deeggarsaaf waraanni dhufu haamlee hin qabu. Sana jajjabeessuuf, waraana kana mo’eera ani, Maqalee to’adheera jedhee labsate.
3ffaa: Uummanni Tigraay guutummaa guutuutti waraana Abiyyiin gar- malee rukutaa jira. Tapha saayikolojii taphachuuf uummanni Tigraay gara keenya goree nu simate jedhee ibsa sobaa baase. Haamilee uummata sanaa cabsuuf yaaluu isaati.
4ffaa: Abiyyi kana booda Tigraayiin dhoksaan waraanuuf barbaada. Akkuma Lixa Oromiyaa fi Kibba Oromiyaa miidiyaa irraa dhorkee waggaa lamaa oliif waraane, Tigraayiinis miidiyaa irraa dhorkee dhoksaan waraanuu fedha. Maqalee qabanneerra, kana booda lolli dhumateera, deebisanii quubsiisuu jinnii jaankaa jedhanii ibsa baasani. Ajandaa hin goonu jechuu isaati.
5ffaa: Waadaa guyyaa sadii keessatti fixeen juntaa qabee deebi’a jedhu sana galmaan gahuu waan hin dandeenyeef, uummanni Itoophiyaa na taajjaba, keessattuu nafxenyaan natti deebiti jechuun waraana xumureera, Maqalee qabadheera bahaa sirbaa jedheeni. Uummata gowwomsuufi. Abiyyi waan jedhetti baha jechisiisuufi.
6ffaa: Oromiyaa fi beenishaangul-Gumuz keessatti riphee loltoonni aanaalee hedduu to’ataniiru. RIB hin jiru waan ta’eef,riphee lolaan saffisaan of ijaaruun lolaa jiru. Abiyyi lola Tigraay mo’adheera jedhee yeroo labsu, caasaa bilxiginnaa WBOn abdii kutachiisaa jirtutti abdii horuufi, riphee lolaa hunda haamilee cabsuun RIB sitti dhufuufi jedhee sodaachisuufi. Hojii saayikolojii taphata Abiyyi.
7ffaa: Erga Abiyyi waraana Tigraayi irratti banee, mootummaan federaalaa utuu hin hafne, mootummoonni naannolee hundi hojii dhaabanii turani. Sodaa keessa galanii biiroo namni hin galu. Shimallis Abdiisaa Waajjira pireezidaantii cufee Abiyyii bira oola, yoo gadi dhufus waajjira dhaabaa oola. Abiyyis masaraa galuu dhaabee ture. Mootummaan harkatti laamsha’aa waan ta’eef, ibsa mooneerra, caffaraatii hojiitti deebi’aa ergaa jedhu dabarse. Psychology!
Walumaa galatti, lolli Tigraay keessaa reefuu jalqabee. Maqalee hanga ammaatti hin to’anne loltuun Abiyyi. Bosonaa fi gaarreen keessa dhokatanii ibsa baasaa jiru waraanni Abiyyi. Kaleessa jeettii waraanaatiin Maqalee reebaa turani, jeettiiwwan sana keessaa tokko rukutee buuseera loltuun Tigraay. Maqalee utuma qabataniillee namni Finfinnee bahee deemee Maqalee taa’ee Tigraayiin bulchu hin jiraatu. Ni rukutamu. Tigreen hin ajajamtuuf. Gaarreen Tigraay, yeroo mara dirree lolaa taati. Dubbiin akka Lixa Oromiyaa fi Kibba Oromiyaa hin ta’uufi. Sibiila gurguddaan loluu itti fufu warri Tigraayi. Loltoonni Abiyyi torbanoota ykn ji’a muraasa keessatti dadhabee Tigraayii ni baha. Abiyyi hojii saayikolojii taphate.
Addunyaanis Abiyyiif ni sobamaaf jedhee hin amanu ani. Dhaabbileen gargaarsaa erga Maqalee to’attanii Tigraayi galee gargaaruu qabna jedhanii Abiyyiin cinqaa jiru amma.
Lola hin dhaabbannedha lolli Tigraay keessaa, hanga Abiyyiin kuffisanitti. Abiyyi Ahmad saaxilameera. Karaan sobaan darban deebii nama dhiba.
Rakkoon Bilxiginnaa fi Tplf Gaanfa Afrikaa gooluu waan jalqabe fakkaata!